MailButler: Ugu dambeyntii, Kaaliyaha Apple Mail ee Ruxday! | Martech Zone
Markaan qoro tan, waxaan hadda ku jiraa boostada jahannamada. Waxaan hayaa 1,021 emayl oo aan la akhriyin jawaabtayduna waxay ku sii socotaa farriimo toos ah iyadoo la adeegsanayo warbaahinta bulshada, wicitaano taleefan, iyo fariimo qoraal ah. Waxaan soo diraa illaa 100 emayl oo waxaan helaa qiyaastii 200 emayl maalin kasta. Taasina kuma jiraan ku biirista joornaalada aan jeclahay. Sanduuqa sanduuqa ayaa ka baxsan xakamaynta iyo sanduuqa eber waa ila macquul sida dinosaur casaan ah.
Waxaan geeyay tan oo qalab ah si aan u caawiyo mar walbana waan niyad jabay, dhammaantoodna waan tuuray oo waxaan ku laabtay Apple Mail oo calankeeda, miirayaasha, iyo liistada VIP-da ay yihiin faro aan u isticmaalo inaan ku xiro biyo xireenka Kuma filna, in kastoo. Weli waan jahwareersanahay. Waxaan rabaa inaan si fiican u maareeyo mawjadaha codsiyada. Waana ogahay in dhowrkii boqol ee emaylba, had iyo jeer ay jirto fursad fursadeed labada lamaane oo ay tahay inaan dusha ka saarnaado.
Qiyaastii toddobaad kahor, Thaddeus Rex, a khabiir brand taas oo nagala shaqeysa macaamiisha laga yaabo ama laga yaabo inayan markhaati iiga ahayn inaan si bayaan ah ugu ooyayo sanduuqa sanduuqa hortiisa, ii soo sheeg MailButler. Si ka duwan barnaamijyo badan oo dhinac saddexaad ah oo baaraya ama la wareegaya sanduuqaaga, MailButler waa wax lagu daro oo si aan kala go 'lahayn ugu dhex milma Apple Mail. Way fiicantahay in Apple ay runti uun shirkadan kor uqaado oo sifooyinkaan ugu darto qaab ahaan.
Fadlan - Adoo yeelidoonaya emayl waxaad si ku meelgaar ah uga dhigeysaa inay ka baxdo sanduuqaaga.
Socodka - Waan ku ogeysiin doonaa haddii qofka warqadda qaata uu dhab ahaantii furay emailkaaga. Tani waa aalad aad u fiican oo loogu talagalay xirfadleyda horumarinta ganacsiga markay arkaan haddii himilooyinku fureen intro ama soo jeedintooda email.
jadwalka - Jadwal jadwal ugu samee e-maylladaada si laguugu soo diro taariikh iyo waqti cayiman oo mustaqbalka ah.
Ka noqo Soo dir - In muddo ah waad ka noqon kartaa dirista emaylka oo aad sixi kartaa khaladaadka iman kara.
Saxiixyada - abuuro saxiixyo emayl qurux badan adoo dooranaya inta udhaxeysa sheyladooda kala duwan.
Cloud Upload - MailButler wuxuu si otomaatig ah ugu dhejiyaa lifaaqyada faylasha daruurta wuxuuna ku darayaa xiriiriyeyaasha u dhigma ee fariintaada halkii.
Xasuusinta Iskuduwaha - Weligaa ha ilaawin inaad ku lifaaqdo feyl fariin mar kale aad ku xustay qoraalka farriinta.
Sawirada Avatar - Iyadoo la adeegsanayo MailButler qofka soo diray emaylka waxaa si fudud loogu arki karaa muuqaalkooda midabka midabka leh.
Sanduuqa Tooska ah - Ka soo gal sanduuqa boostadaada inta badan la istcimaalo isla markaana ka soo gal qolka miiska - hal guji meel kasta oo ka mid ah
Emojis - Kuwaas oo ah astaamo yaryar oo soo jiidasho leh oo qayb ka ah isgaarsiinta casriga ah… hadda waxay ku jiraan emails, sidoo kale.
Unsubscribe - MailButler waxay ufududaynaysaa sidii aan hore loo arag in laga saaro rukhsadda wargeysyada aan loo baahnayn: Hal guji!
Waa tan tallaal sida ugu fudud eeMailButler jadwalku wuu shaqeeyaa. Mid ka mid ah astaamaha aan jeclahay ayaa ah inay ilaaliso goobtaydii ugu dambaysay - sidaas darteed waan haystaa Maalinta Ganacsiga ee xigta 8:00 AM. Tani way fiicantahay maxaa yeelay runtii dan kama lihi dadka markay arkeen inaan ka jawaabayo emaylkooda 2:48 AM, heh.
Astaamaha Soo Socda ee MailButler
hawlaha - Ku calaamadee emaylkaaga sidii aad wax u samayn lahayd si aanad waligaa u iloobin hawlaha muhiimka ah mar labaad.
Nasashada sanduuqa - Naso, hayso MailButler: Si otomatig ah u jooji akoonnada emaylka qaarkood iyadoo ku saleysan saacadahaaga shaqada.
quote - Si dhakhso leh ula wadaag sicirka farriinta emaylka ee barnaamijyada ama adeegyada kale.
Giphy - Adeegsiga 'MailButler' waxaad si toos ah ugu heli kartaa trazillion sawirro firfircoon si aad si fiican ugu muujiso naftaada.
Ku rakib MailButler BILAASH!
Aad ayaan ugu faraxsanahay taas MailButler leeyahay Nasashada sanduuqa muujinta hoos horumarka. Marar aad u tiro badan waxaan ka helnaa emayl xilli dambe ah macaamiisha oo leh codsiyo aan ku boodno. Maaha inaan dooneyno inaan jawaab celinno, laakiin waxaan inta badan tababar siinaa macaamiisheenna inay ficil ahaan nala soo xiriiri karaan waqti kasta oo maalin iyo habeen ah… ma ahan dhaqan weyn maaddaama aannu ahayn waax taageero ah. Waxaan door bidi lahaa inaan joojiyo helitaanka emaylka illaa maalinta ganacsiga ee xigta. Macaamiishayada laga yaabo inay xaalad degdeg ahi ku soo dhacdo ayaa mar walba na soo wici kara.
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa iskuxiraha gudbinta ee boostada anigoo rajeynaya in tiro kaa mid ah aad rakibtid oo aad bixisid adeegga waxaanan ku heli karaa bilaash! 🙂
Tags: tufaaxa tufaaxadaruur mail mailboostada emojisjadwalka boostada appleraadinta boostada tufaaxamail tufaax ka joojiemailsanduuqa eberMailboosteejada